इन्टरनेट कुलतले निम्तिँदै रोग – Sourya Online
इन्टरनेट कुलतले निम्तिँदै रोग
‏विनिता दाहाल २०७६ साउन २८ गते ६:४१ मा प्रकाशित
केही समयअघि गर्धन दुख्ने समस्या लिएर जचाँउन आएका २५ वर्षीय युवकलाई मेरुदण्डको हाड खिइने जटिल रोग भएको अनुमान हाडजोर्नीसम्बन्धी चिकित्सक राजेश महर्जनले गरेकै थिएनन् । प्रायः ५५ वर्षमाथिका पुरुषहरुमा देखापर्ने रोग ती युवकमा देखेर डा. महर्जन अचम्ममा परे ।
एक्सरे रिपोर्ट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने ती युवकको सामान्य अवस्थामा फर्कनै नसक्ने गरी हाड खिइसकेको रहेछ । पछिल्लो समय गर्धन दुख्यो र रिँगटा लाग्यो भन्दै जँचाउन आउने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्ने गरेको डा. महर्जनको अनुभव छ । उपचारका लागि आउका ती युवकको दिनचर्या र जीवनशैलीका बारेमा जानकारी लिएपछि उनलाई पक्का भयो अधिकांश युवाहरूजस्तै उनको पनि कम्प्युटर र मोबाइलमा धेरै समय बित्ने रहेछ ।
ती युवामा इन्टरनेटको कुलत केही वर्षदेखि रहेछ र उनी कार्यालयमा काम गर्दा होस् वा घरमा बस्दा कि कम्प्युटर कि मोबाइल चलाएर एउटै आसनमा घण्टौँ बस्ने रहेछन् । डा. महर्जन भन्छन्, ‘हाम्रो शरीर कम्प्युटर चलाउँदा बस्ने वा मोबाइल चलाउँदा पल्टिने आसनका लागि बनेकै होइन ।’ ‘तर पछिल्लो समय गर्धन दुख्यो भनेर आउने अधिकांश बिरामीको समस्या उनीहरू धेरै बेरसम्म एउटै ठाउँमा हलचल नगरी बस्नु हो ।’
कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मात्र नभई घरमा बस्ने गृहिणीमा पनि उमेर नपुग्दै त्यस्तै समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन् । त्यस्तो रोग लिएर आउने अधिकांश गृहिणीहरू घरमा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल चलाएर बस्ने गरेको सुनाउँछन् । ‘श्रीमान् अफिस र छोराछोरी स्कूल, कलेज गएपछि काम हुँदैन अनि फेसबुक र युट्युब चलाएर बस्छौँ भन्ने गरेको छन्,’ डा. महर्जनले भने, ‘उनीहरूको पनि उमेर नपुग्दै हड्डी खिइने चरणमा पुगिसकेको भेटिन्छ ।’ उनले भटेका धेरै जसोको समस्या एकै प्रकारको छ ।
रोगको लक्षणः त्यसबाहेक मांसपेसी दुख्यो र गर्धन दुख्यो भन्ने खालका सामान्य दुखाइ लिएर आउने बिरामीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको डा. महर्जन बताउँछन् । धेरैबेर कम्प्युटर मोबाइलमा बस्ने र दैनिकी नै त्यही बनाउँदा त्यसले सुरुमा गर्धनको मांसपेसी कक्रक्क हुने हुन्छ । अनि बिस्तारै दुख्न थाल्ने र त्यसपछि घाँटी वा ढाडको हड्डीको आकार परिवर्तन हुन्छ । अन्ततः हड्डी खिइएर स्नायुमै असर परेपछि निको बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन् । त्यसैले घाँटी कक्रक्क परेको छ र दुखाइ छ भने त्यही वेला नै उपचार गराउन, आवश्यक आराम गर्न र व्यायाम गर्न उनी सुझाउँछन् ।
डा. महर्जन भन्छन्, ‘नत्र तिनै युवकको जस्तै हुन्छ जसले धेरै समय आराम गर्नुपर्छ र बाँचुन्जेल व्यायाम त गर्नैपर्छ । ‘तर त्यति गर्दा पनि हामीले सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्दैनौँ । उनको खिइएको हड्डी केही गर्दा पनि पहिलाको जस्तो अवस्थामा पु¥याउन सकिँदैन ।’
मानिसको गर्धनमा मेरुदण्डका सातवटा हड्डी हुने र निहुरेर मोबाइल चलाउँदा वा एउटै आसनमा बसेर कम्प्युटरमा काम गर्दा मेरुदण्डको त्यही भाग बोझ पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘(मेरुदण्डको) हड्डी धस्सिँदै जाँदाकै अवस्थामा उपचार गरिएन भने खिइन थाल्छ र खिइएपछि नसा (स्नायु) मा छुन्छ,’ उनी भन्छन् । मेरुदण्डले मस्तिष्कलाई स्नायुप्रणालीसँग जोड्छ । मेरुदण्डका हड्डीमा समस्या उत्पन्न हुँदा पूरै शरीरमा समस्या पर्न सक्छ ।
‘त्यसपछि रिँगटा लाग्ने वा हात झम्झमाउने हुन्छ । त्यो भनेको चाहिँ अलि जटिल अवस्थामा पुग्नु हो र पुरानै अवस्थामा फर्काउन असम्भवजस्तै हुन्छ ।’ पहिलापहिला पुरुषहरू ५५ वर्ष पुगेपछि र महिलाहरूको महिनावारी रोकिएपछि यो समस्या देखिने गरेको भए पनि अहिले युवावस्थामै धेरै बढेकोले समयमै ध्यान पु¥याउन उनी सुझाब दिन्छन् ।
यसबाट जोगिने उपायः त्यस समस्याबाट जोगिनका लागि डा. महर्जनले सुझाब दिएका छन् । उनको सुझाबअनुसार कम्प्युटर चलाउँदा वा मोबाइल चलाउँदा लामो समय एउटै आसनमा नबसेर आसान फेर्नु उपयुक्त हुन्छ । उनका अनुसार ३० मिनेट पुगेपछि अनिवार्य आफ्नो ठाउँबाट उठेर केहीबेर घाँटी, ढाड, पाखुरा र कम्मर चलाउने, सम्भव भएसम्म केही मिनेट हिँड्ने र्गदा राम्रो हुन्छ ।
यस्तै, गरी कम्प्युटर चलाउँदा आँखाबाट स्क्रिन सीधा हुनेगरी राख्ने र भुइँ छोएर बस्न मिल्ने खालको कुर्सीमा बस्ने । कम्प्युटर चलाउँदा आरामदायी कुर्सीको सट्टा सामान्य खालको कुर्सीमा ढाड सीधा राखेर बस्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै कम्प्युटर, मोबाइल वा घडीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश दिने एप राख्दा त्यसले पनि वेला वेला सचेत गराउँछ ।
लगातार कम्प्युटर र मोबाइल चलाउँदा ढाड र गर्धनमा मात्रै नभई आँखामा पनि समस्या भएको भन्दै उपचार गराउन आउने बिरामीको संख्या बढेको डा. इरिना कंसाकार तुलाधरले बताइन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय खासगरी बालबालिकाहरूले चस्मा लगाउनुपर्ने समस्या बढेको छ । त्यस्तै किशोरावस्थादेखि माथि उमेरका बिरामीमा भने आँखामा सुक्खापन धेरै हुने समस्या लिएर आउने गर्छन् । ‘खासगरी गेम खेल्ने बच्चाहरूमा टाढा नदेखिने ‘मायोपिया’ हुने गरेको देखिन्छ,’ डा तुलाधरले भनिन्, ‘यस्तै गरी किशोरावस्थादेखिका अधिकांश बिरामीहरूमा आँखा सुख्खा हुने पाइएको छ ।’
कुनै पनि ग्याजेटमा हेर्दा लामो समयसम्म एकटक हेरिरहने र सामान्यतः हाम्रो आँखाको परेला जतिपटक झिम्किनुपर्ने हो त्यति नझिम्किँदा त्यसले आँखाकस मांसपेसी थाक्ने र सु्क्खापन देखापर्ने उनले बताइन् । त्यसैले उनी सकेसम्म स्क्रीनमा कम हेर्न सुझाव दिन्छीन् ।
बालबालिकालाई मोबाइल वा कम्प्युटर प्रयोग गर्न कम दिने र यदि समस्या भए समयमै उपचार गराउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘उनीहरूलाई टाढा नदेख्ने समस्या भइसकेको हुन्छ र चस्मा नलगाई स्क्रीन हेर्दा आँखालाई थप दबाब पर्छ त्यसैले उपचार समयमै गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
दिनमा दुई घण्टाभन्दा बढी कम्प्युटरमा काम गर्नेहरूलाई ‘कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम’ हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । लगातार स्क्रिन हेर्ने मानिसहरूमा आँखा सुक्खा हुने, पोल्ने, बिझाउने र हेर्नै असहज हुने गर्छ ।
डा. तुलाधरकाका अनुसार निम्न कुराहरू पालना गरेर आँखा जोगाउन सकिने छ । स्क्रिन धेरै नहेर्ने, हेर्नै परे स्क्रिनको उज्यालो बाहिरी वातावरणको उज्यालो भन्दा धेरै नबढाउने, ‘ब्लुलाइट’ कम गर्ने ।
२०–२०–२० भनिने आँखाको व्यायाम गर्ने उक्त व्यायाम गर्न प्रत्येक २० मिनेटमा २० फिट टाढा २० सेकेन्डका लागि लागि हेर्ने) । यो राम्रो विधि रहेको उनी बताउँछिन् । यस्तै, काम गर्दा आँखाको परेला पर्याप्त मात्रामा झिमझिम गर्ने र आँखाबाट माथि हुने गरी स्क्रिन नराख्ने ।
यस्तै, गरी आँखा सुक्खा हुने वा बिझाउने भयो भने ‘एन्टी रिफ्लेक्टिभ कोट’ भएको चस्मा लगाउने र सुक्खा हुन नदिने थोपाहरू हाल्ने
यसका साथै चस्मा लगाउने व्यक्तिले नियमित रूपमा चस्माको पावर ठीक छ छैन जाँच गराइरहने यसले आँखाको अवस्था के कस्तो छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।
यसका साथै शरीरका अन्य अंगलाई जस्तै आँखालाई पनि वेला वेला चाहिने आराम दिनुपर्ने उनले बताइन् । (बिबिसीको सहयोगमा)